शेयर बजार परिसुचक नेप्से सोमवार ४५ दशमलव २५ अंकले गिरावट | Business TV Nepal
जेष्ठ १७, काठमाडौं । शेयर बजार परिसुचक नेप्से सोमवार ४५ दशमलव २५ अंकले घटेर २ हजार ७८२ दशमलव ६८ पुगेको छ । त्यसैगरी ‘क’ वर्गका कम्पनिको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स ६ दशमलव ५८ अंकले घटेर ५०० दशमलव ४७ पुगेको छ ।
सोमवार शेयर बजारमा रू. १३ अर्ब ८९ करोड ८ लाख ८८ हजार बराबरको कारोवार भएको छ ।सोमवार ३ करोड ८ लाख ५४ हजार ७० कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
सोमवार बैकिङ ,बिकास बैक र फाइनन्स तिनै वित्तिय क्षेत्रको समुहगत परीसुचकमा गिरावट आएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा १ दशमलव शून्य १, बिकास बैक क्षेत्रमा १ दशमलव ५१ र फाइनन्स क्षेत्रमा शून्य दशमलव ७४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
साताको दोस्रो दिन यो दिन कारोबार रकममा सर्वाधिक हिस्सा राधी विद्युत् कम्पनीले ओगटेको छ । यो दिन उक्त कम्पनीको रू. ९१ करोड ७ लाख ८५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।